Saakay iyo waxyaabihii ay Wargeysyada ka qoreen Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda – Gool FM
Byare January 20, 2019
(Europe) 20 Jan 2019. Waxaa dib u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kaa oo tixnaan doona ilaa 31-da bishan.
Haddaba waxaan sii anba qaadi doonaa inaan subax kasta idin soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ay wargeysyada ka qoraan Xanta suuqa iyo xiddigaha la doonayo.
Xiddiga Chelsea ee 19-jirada England Callum Hudson-Odoi ayaa diyaar u ah inuu iska diido dalabka heshiis kor dhinta Blues kaa uu usbuuciiba ku qaadan lahaa 85,000 oo bound oo wuxuu doonayaa inuu u dhaqaaqo kooxda reer Germany ee Bayern Munich waayo 18-jirka wuxuu aaminsan yahay in fursado badan oo hormar ah uu ka helayo horyaalka Bundesliga. (Mail on Sunday)
Arsenal ayaa dooneysa in xiddigeedii hore ee garabka weerarka Marc Overmars uu noqdo agaasimaheeda farsamada ee Emirates Stadium waayo Tababare Unai Emery iyo madaxa shaqaaleysiinta ee Sven Mislintat ma awoodaan inay sameyaan xiriir shaqo. Laacibkii hore ee Holland Overmars 45-jir ayaa iminka ah Agaasimaha Ciyaaraha ee kooxda Ajax. (Sunday Mirror)
Heshiiskii uu weeraryahanka West Ham Marco Arnautovic ugu dhaqaaqi lahaa horyaalka Shiinaha oo joogsasday kaddib markii Guangzhou Evergrande ay ka baxday qorshihii ay 45-milyan kula soo saxiixan lahayd 29-jirka reer Austria. (Mail on Sunday)
Chelsea ayaa Barcelona wax ka waydiisay xiddigeeda reer Brazil horeyna uga tirsanaa Liverpool ee 100 milyan lagu qiimeeyay Philippe Coutinho, 26-jir. (Sunday Express)
Heshiiska amaahda ah ee dhow uu Chelsea ugu soo dhaqaaqayo weeraryahanka Juventus ee Gonzalo Higuain 31-jir ayaa ka dhigeysa laacibka reer Argentina inuu ka mid noqdo xiddigaha ugu mushaarka badan Premier League 270,000 usbuuciiba. (Daily Star Sunday)
Manchester City ayaa si lama filaan ah amaah ugu dhaqaaqi karta laacibka qadka dhexe reer Germany ee kooxda Schalke Sebastian Rudy, 28-jir. (Sun on Sunday)
Laacibkii hore ee qadka dhexe Manchester United Paul Scholes ayaa lagu wadaa in loo magacaabo tababaraha Cusub ee Oldham. (Telegraph)
Real Madrid ayaa rajeynaysa in Weeraryahanka reer Belgium Eden Hazard ay kula soo saxiixan karto lacago ka yar 100-ka milyan ay dul dhigtay Chelsea, 28-jirka ayaa qandaraaskiisu dhacayaa Jun 2020. (Marca)
Weeraryahanka reer France ee kooxda PSG,Kylian Mbappe, 20-jir ayaa sheegay in laga yaabo in mustaqbalka uu isku dayo inuu u dhaqaaqo Real Madrid. (AS)
Tababaraha Arsenal Unai Emery ayaa rajeynaya in saxiixyo Cusub ay kooxdiisu yimaadaan Usbuucan iyadoo ay jiraan wararka la xiriirinaya xiddiga qadka dhexe reer Spain ee kooxda Barcelona Denis Suarez, 25-jir. (Daily Star Sunday)
Tababare Marco Silva ayaa markale ku celiyay in naadigiisa Everton aysan bishan sameyn doonin wax saxiixyo ah. (Liverpool Echo)
Napoli ayaa soo jiiday dalabki ihore ee kaga yimid AC Milan ee ku aadan 21-jirka reer Guinea ee qadka dhexe kaga ciyaara Amadou Diaw ara, kaa oo lala xiriirinayay Tottenham iyo Wolves.(Inside Futbol)
Madaxa Fulinta Inter Milan Giuseppe Marotta ayaa sheegay in Kabtaka Ateltico Madrid Diego Godin uu doonayo inuu ku soo biiro kooxda reer Talyaani. 32-jirka daafaca dhexe ee reer Uruguay ayaa lala xiriirinayay Manchester United.(Calciomercato)
Kadib Brahim Díaz, Real Madrid oo ciyaaryahan kale ee cusub ka dooneysa kooxda Manchester City
"Ma Ordi karo, Wax ma Difaaci karo, Gool ma Caawin karo, waxaa u dheer Baas Bilaash ah iyo.....".-